गुल्मीमा पनि देखियो कोरोना: नेपालमा संक्रमितको संख्या ३५७ पुग्यो
काठमाडौं । सोमबार एकैपटक ५३ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ३५७ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार बाँकेमा मात्र ४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । संक्रमितहरु मध्ये ४६ जना पुरुष र एक महिला छन् ।त्यस्तै गुल्मी, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा १/१ जना गरी ६ जनामा पनि सोमबार नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
उनीहरु १८ देखि ३६ वर्ष उमेर समूहका रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । उनीहरुको स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्याक ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको उनले बताए ।
गुल्मीका संक्रमित व्यक्ति मदाने गाउँपालिका वडा नं ६ पुर्कोटदहका हुन् । उनी केही दिनअघि मात्र निमोनियाको समस्या देखिएपछि उपचारका लागि बुटवल गएका गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
घरबाटै कति ननिस्कने र शिक्षण पेशामा रहेका उहाँमा कसरी कोरोना लाग्यो, हामी अचम्ममा परेका छौं’ उनले भने ।
नदीको आधारमा कसरी सीमाना छुटाउने ? अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान के हो ?
सन्धिखर्क १० का एक युवाले लेखे जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची र सनपालाइ कोरोनाको बिषयलाइ लिएर पत्र
हाम्रो राष्ट्रवाद चिरनिद्रामा परेर चीरहरण भएको हो कि?